‘राक्षसी’ बर्मुडा त्रिकोणको रहस्य – Rajdhani Daily
‘राक्षसी’ बर्मुडा त्रिकोणको रहस्य
विश्व आफैंमा रहस्यमय छ । यो देवताले बनाएर वा राक्षस बसेर वा अर्को ग्रहका खमानिसहरू आएर रहस्यमय बनेको भने होइन । मानिसका लागि जे थाहा भएन वा थाहा हुन सकेको छैन, त्यो रहस्य हो । त्यसको बखान नै रहस्यमय हुन्छ । मानिसको जात उत्सुक र जिज्ञासु हुन्छ । सातै दिन वा सातै काम बिताएर भए पनि ऊ रहस्यमय कुराहरू सुन्न आतुर हुन्छ । यसको अर्को कारण पनि हो मानिसलाई खानाको जस्तै ज्ञानको भोक पनि लाग्छ ।
हरेक कुराको ज्ञान आफूलाई होस् भन्ने मानिस चाहन्छ । अहिलेको २१औं शताब्दीमा आएर त मानिसले आफ्नो एउटा हातमा विज्ञानको अस्त्र र अर्को हातमा प्रविधिको अस्त्र समातेको छ । धर्मग्रन्थहरूमा बयान भएअनुसार विष्णुको केवल दाहिने हातमा र एउटा मात्र चक्र थियो, अहिले मानिसका हातमा दुईदुईवटा चक्रहरू छन् । ढिलो होस् वा चाँडो यसले रहस्य भनिएका कुराहरू पत्ता लगाएर छाड्छ । उसका उत्सुकता र आशक्तिपनलाई विज्ञान र प्रविधिका यी दुई चक्रहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । आजभन्दा ७० वर्ष पहिलेदेखि नै भूत वा राक्षस बसेका हुनाले बर्मुडामा पानीजहाजहरू, हवाईजहाजहरू र ससाना हेलिकोप्टर तथा अन्य मानव निर्मित कुराहरू हराउने गरेका छन् भनी आशंका गरिने गरिएको थियो । यसका बारेमा कहिले काहीँ त नेपाली सेवा र बीबीसी भाषा सेवामा पनि अर्को ग्रहका प्राणीहरू उडन्तस्तरी वा ‘फ्लाइङ ससर’ लिएर बर्मुडाको त्रिकोण वा ट्रिएंगलबाट जहाजहरू र मानिसहरू अपहरण गरेर लैजाने गर्दछन् भनेर रहस्यमय कथा सुनाउथे । तर, ती दिन गए,यी दिन आए, मानिसले विज्ञानको सहाराले सत्य पत्ता लगाए ।
पृथ्वी आफैं घुम्छ, रहस्यजस्तै छ । पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ, रहस्यजस्तै छ । पृथ्वीमा रहेको समुद्रको पानी रेलिएर वा पोखिएर वायुमण्डलको सतहमा कतै जाँदैन, रहस्यजस्तै छ । अरू त अरू नै भए, पृथ्वीको आकाशमा वहने वायु पनि पृथ्वीको वरपरको सतह छाडेर अन्तरिक्षमा पुगेर विलय पनि हुँदैन । पृथ्वीमा ६ वटा ऋतुहरू घुमिफिरी आइरहन्छन् । चन्द्रले पृथ्वीलाई घुम्छ तर चन्द्रमाको एक भाग मात्र पृथ्वीमा देखिइहन्छ । अर्को भाग कुनै जुनीमा पनि पृथ्वीबाट देखिएन र देखिँदैन पनि । हामी बसेकै पृथ्वीमा पनि कतिपय त यस्ता भागहरू छन्, जहाँ आकाशी जहाज, पानीजहाज र मानिसहरू हराउने गरिरहेका छन् । तीमध्ये सबैको आश्चर्यजनक कौतुहलतामा परेको ठाउँ हो बर्मुडा, अर्थात् बर्मुडाको त्रिकोण । यो समुद्रमा रहेको गहिरो पानीको भाग हो । पानीजहाज त पानीमा गए र हराए, तर आकाशमा उड्ने जहाज पनि किन हराउँछन् त ? तर वैज्ञानिक तथा खोज अनुसन्धानकर्ताहरूले बर्मुडा ट्रिएंगलमा यसो हुनुको कारण हर क्षण उठिरहने सय फिट अग्लो खतरनाक हात्ती सोढें पानीभुमरी र यसले उठाएको पानीका अग्ला अग्ला छाल तथा लहरहरू नै हुन् ।
त्यस्तो लहर किन उठ्छ ? यसको कारण अरू नै हुन सक्छ । तर, यही भुमरीमा परेर समुद्री जहाजहरू यो रहस्‍यमयी बर्मुडा ट्रिएंगल हराउँछन् । समुद्रमाजहाजहरू जाँदायही बाटो भएर जानीजानीवाभुलबस यही बाटो गुज्रदा समुद्रमाएक्कासी हराउने गर्दछन् । यो हाम्रो पृथ्वीको सबैभन्दा रहस्‍यमयी क्षेत्र हो । यसको सामुन्ने पुगेकामानवनिर्मित कुराहरू यहाँगायबहुने गर्दछन् । २४ औं घण्टा निगरानी राखेर सेटेलाइटबाट लिइएका तस्वीरहरूमा बर्मुडा ट्रिएंगलका तस्वीरहरू आश्चर्यजनक रुपमा खिचिएका छन् । यी तस्बिरहरूले त्यसका बारेमा मानव जातिमा रहेका केही रहस्य र भ्रमका पर्दाहरू हटाउन मद्दत गर्नेछन् । अहिलेसम्म पाइएका तस्बिरहरूमा बर्मुडामाथि मडारिने बादल, सय फिटसम्म आकाशमा उठ्ने पानीको हात्तिसुँढे भुमरी र हुरी तथा पानीका अग्ला छालहरू रहेका छन् । यी समुद्रको सतहबाट उठ्ने र आकाशमा पुगी निकै ठूलो गर्जनका साथ घुम्ने गर्दछन् । आश्चर्यको कुरा त के पनि छ भने हालसम्म त्यहाँ अनुसन्धानका लागि यो ७० वर्षसम्म कोही पनि अनुन्धाता र वैज्ञानिक जान आँट गरेका छैनन् । कसरी जाने भन्ने नै उपाय लागेको छैन ।
वैज्ञानिकका अनुसार त्यहाँ सघन प्राकृतिक चुम्बकीय घनत्‍व रहेको छ । यसैका कारण त्यहाँ पुगेका केही कुराहरू पनि फर्केर आउन सक्दैनन् । उनीहरूका अनुसार बर्मुडा ट्रिएंगलको रहस्‍य भनेको त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिति र खराब मौसम नै भनेका छन् । बाहिरस्वरूपमा देख्दा त्यसो भए पनि भित्री रूपमा के कुराले काम गरेको छ, त्यो अझैं पत्ता लागेको छैन । पछिल्लो अनुसन्धानमा मात्र त्यहाँ चुम्बकीय घनत्वको प्रभाव रहेको कुरा स्वीकार गर्न थालिएको छ । यस्तो रहस्यमय बर्मुडा ट्रिएंगल फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्‍युर्टोरिकाको बीचमा ठूलो समुद्रीभाग ढाकेर रहेको छ । करिब ७ लाख वर्ग किलोमिटमा यो क्षेत्र फैलिएको छ । यो भूमध्य रेखाको नजिक र संयुक्त राज्य अमेरिकाको छेउँमा रहेको छ । यो उत्तरपश्चिम आन्ध्र महासागरको एक भाग हो । जहाजहरू तथा अन्य कुराहरू हराउने भएकाले यसलाई ‘राक्षसी त्रिकोण’ पनि भनिन्छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वमा आएका खतरनाक सुनामीहरूमा पनि यो सबैभन्दा उच्च र खतरनाक रहेको बताइन्छ । ंसेटेलाइटबाट दिइएको भिजुअल तस्बिरमा त अझ आश्चर्यको कुरा के सम्म पनि देखिन्छ भने सैयौं फिट आकाशमा उठ्ने र हावाहुरी र बादल मडारिने यो पानीको भुमरीको सबै प्रक्रिया मिनेटभरमा पूरा भइसक्छ । यहाँ लाग्ने कुहिरो वा बादल प्राकृतिक रूपमा लाग्ने कुहिरो वा बादलभन्दा निकै भिन्न रहेको पाइएको सेटेलाइट तस्बिरले देखाएको छ ।
बर्मुडा ट्रिएंगलमा मडारिने बादल हेक्सागनआकारको हुने त्यो बादलको मुनि २७४ किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले आँधीहुरी आउने गरिरहन्छ । यसलाई वैज्ञानिकहरूले ‘एयर बम’भन्ने गरेका छन् । यो पनि अडकल गरिएको छ कि आकाशबाट एयर बम आएर समुद्रमा ठोकिने गरिरहेको छ । आजसम्म २ सय भन्दा बढी हवाईजहाज र पानीजहाजतथा हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यानलिएको यो रहस्‍यमयी बर्मुडा त्रिकोणले १९ ठुला फ्लाइट, टीबीएम नामक युद्धक बमवर्षक विमान खाइसकेको छ । मेरी सेलेस्टीभन्दा फरक घटनाहरू यसमा भएका छन् ।
Tags: ‘राक्षसी’ बर्मुडा त्रिकोणको रहस्य
शिक्षकलाई तर्साएर गुणस्तर आउँदैन (8,192)
साथीको हत्या गर्ने दुई जना ३२ दिनपछि पक्राउ (2,695)